Sida Loo Bilaabo Blog Fashion 2021 | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/Sida Loo Bilaabo Blog Fashion 2021
Sida Loo Bilaabo Blog Fashion 2021
Blog-yada moodada ayaa caan ku ah oo hadda waa wakhti ku habboon inaad adigu iskaa u bilowdo. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad ogaato sida loo bilaabo.
Aqoonta yar iyo dufan suxulka qaarkood, waxaad ku bilaabi kartaa blog-kaaga moodada WordPress oo xitaa lacag ka samee.
Markaa, waa kan sida loo sameeyo!
Sida Loo Bilaabo Blog Fashion
Dhammaantood waxay ka bilaabmaan aasaaska blog-kaaga dhawaan- noqon doona. Taasina waxay ka dhigan tahay magacaaga domain iyo martigeliyahaaga.
Dooro Magaca Domain ee la xasuusan karo
Magaca domain waa ciwaanka mareegaha ay isticmaalayaashu galaan si ay ugu xidhmaan bloggaaga sida www.domain-name.com. Taasi waa sidoo kale sababta ay muhiim u tahay in si taxadar leh loo doorto magaca aad doorato: waxay u taagan tahay bloggaaga.
Waa kuwan sifooyinka samaysa magac domain weyn:
dhererkeedu waa gaaban yahay.
Waa dadaal la'aan in la xasuusto.
Marka qof maqlo, way fududdahay in la ogaado sida loo higgaadiyo.
Mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inaadan helin magaca saxda ah ee bloggaaga, laakiin kala duwanaansho dhow ayaa caadi ahaan weli ah ikhtiyaar ku habboon.
Waxaad dooran kartaa magac domain kaas oo si ulakac ah loo higaadiyay ama kelmad la sameeyay. Mararka qaarkood, way shaqayn kartaa. Kaliya iska hubi inaad si taxadar leh u tixgeliso faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka magaca leh sifooyinkan.
In kasta oo ay u shaqeyso Reddit iyo Pinterest, waxaa laga yaabaa inaysan ku habboonayn blog-kaaga moodada. Sababta ayaa ah in labada goobood ee aan soo sheegnay ay yihiin kuwo si adag online-ka ah.
Haddii aad raacdo jidkooda oo aad qorsheysato samaynta muuqaalada shakhsi ahaaneed ee usbuuca fashion mustaqbalka ama aad rabto inaad marti ku noqoto podcasts oo aad xitaa sameyso muuqaalada TV-ga, waxay kaa caawinaysaa inaad yeelato magac domain xusuus leh halkaas oo higgaaddiisu ay noqon doonto mid cad. .
Habkaas, dadku waxay si dhab ah u heli karaan blog-kaaga ka dib markay maqlaan kaliya.
Kadib markaad go'aansato magac domain, waxaad ka iibsan kartaa diiwaan-hayaha domainka.
Eeg Immisa Qiimaha Magaca Domain-ka? 4 Qodob oo Muhiim ah oo Saamayn ku leh waxa aad filanayso inaad wax badan ka bixiso faahfaahinta.
Magaca domain waa ciwaanka goobtaada oo waxa uu matalaa balooggaga.
Doorashada WordPress Hosting lagu kalsoonaan karo
Hosting waa halka lagu kaydiyo bloggaaga si loo galo waxaana jira qorshayaal kala duwan oo aad kala dooran karto bixiyeyaasha martigelinta ee kala duwan.
Haddii aad rabto inaad ogaato sida loo bilaabo blog-ka moodada, dhammaan waxay ku bilaabmaan doorashada qorshaha martigelinta iyo dejinta blog-kaaga.
Xulashada qorshaha saxda ah waa lama huraan. Haddii aad doorato mid aan haysan kheyraad ku filan oo blog-kaagu uu noqdo mid faayras ah, goobtaada waa la xiri karaa ilaa aad ka cusboonaysiiso qorshahaaga ama waxaad ku dhameyn kartaa inaad bixiso hanti yar oo ah khidmadaha dheeraadka ah.
Dhanka kale, haddii aad hesho qorshe aad ugu adag baahiyahaaga, waxaad bixin doontaa kharash dheeraad ah agabka aadan xitaa u baahnayn.
Haddii aadan dooran martigelinta la maareeyay, waxa kale oo aad ku dhegganaan kartaa ilaalinta balooggaga iyo degaankaaga martigelinta keligiis. Mararka qaarkood, waxay u ekaan kartaa shaqo waqti-buuxa ah oo lafteeda ah, gaar ahaan haddii ay wax qaldamaan.
Xariiqda hoose ayaa ah, haddii aad rabto inaad ogaato sida loo bilaabo blog-ka moodada, gaar ahaan haddii aad rabto inaad ganacsi u beddesho, waxaad u baahan tahay inaad hesho qorshaha martigelinta saxda ah.
Haddii kale, waxay la mid tahay inaad ku dhegtay surwaal aan ku habboonayn saddex xilli ka hor markii aad ku dhowdahay inaad la kulanto Ralph Lauren.
Ma doonaysid inaad wax fursad ah ka qaadato labada xaaladoodba.
Waa maxay sababta Platform-ka Blogging-ka ee bilaashka ah aysan ku habboonayn
Waxay noqon kartaa mid soo jiidasho leh inaad hesho martigelin bilaash ah si aad u barato sida loo bilaabo blog-ka moodada bilaashka ah, laakiin waxaa jira dhowr sababood oo taasi aysan fikrad wanaagsan u ahayn, gaar ahaan haddii aad qorsheyneyso inaad lacag ka sameyso bloggaaga.
Bilawga, bixiyeyaasha martigelinta bilaashka ah waxay ku soo bandhigaan xayeysiisyada blogkaaga si ay u daboosho kharashaadka. Tani waxaa laga yaabaa inaysan u muuqan dhibaato ilaa aad ka fikirto in booqdayaashu ay riixi karaan meel ka baxsan blogkaaga oo aysan dib ugu soo laaban.
Xaaladaha qaarkood, xayeysiisyada waxaa lala xiriirin karaa sumaddaada ee ma ahan qaab wanaagsan.
Martigelinta bilaashka ah waxay sidoo kale ku timaadaa qiimaha inaadan si buuxda u kantaroolin balooggaaga maadaama qorshayaasha ay inta badan leeyihiin astaamo iyo awoodo xaddidan si ay dhaqaale ahaan u shaqeeyaan.
Taas macnaheedu waa in aad xadidi doonto marka ay timaado inta aad ku habeyn karto naqshadeynta goobtaada, qaabeynta, shaqeynta, iyo walxaha kale ee la midka ah.
In kasta oo laga yaabo in ay caadi tahay in la bilaabo, mar uu balooggaagu koro, martigelinta bilaashka ah ma gooyn doonto.
Marka, haddii aad qorsheyneyso inaad si dhakhso leh u korto, is-martigelinta blog-kaaga moodada ayaa ah ikhtiyaarka ugu fiican.
Sida Loo Doorto Marti-geliyaha Lagu kalsoonaan karo
Waxaad u baahan tahay martigeliyaha la isku halayn karo oo haysta taageero macaamiil oo aad u fiican oo sidoo kale wax ka qaban kara socodka gaadiidka si loo hubiyo inaad ku taagan tahay cagta saxda ah. Waa qayb ka mid ah dhinacyada farsamada ee aad u baahan tahay si aad u ogaato sida loo bilaabo blog-ka moodada.
Martigelinta xasilloon iyo taageerada weyn, waxaad si fudud ku nasan kartaa adiga oo og arrin kasta oo ka iman karta si dhif ah oo si dhakhso ah loo xalliyo.
Martigeliyaha la isku halayn karo kaliya ma xasilo, laakiin si degdeg ah ayuu u ordayaa waana ammaan sidoo kale.
Haddii aad u baahan tahay caawimaad balooggaaga, martigelinta la maareeyay waa ikhtiyaar weyn maadaama dhinacyo badan oo muhiim ah oo maaraynta balooggaaga lagu daryeelo adiga sida amniga iyo cusbooneysiinta.
Tusaale ahaan, martigeliyaha sida Behmaster wuxuu leeyahay dhammaan sifooyinkaas.
Behmaster waxay leedahay martigelin la isku halayn karo, deggan, oo degdeg loo maareeyey.
Doorashada Mawduuca WordPress ee Wanaagsan
Marka ay timaaddo ogaanshaha sida loo bilaabo blog-ka moodada, waa lagama maarmaan in la doorto mawduuc adag. Taasi waxay ka dhigan tahay mawduuc WordPress oo si wanaagsan loo sumadeeyay si uu uga caawiyo blog-kaaga moodada inuu si dhakhso leh u xajiyo. Laakin, waxa kale oo aad u baahan tahay mid il-qabad leh.
Hel mawduuc leh labadaba waxaadna abuuri doontaa khibrad isticmaale oo horumarsan. Tani waxay ka caawisaa dadka soo booqda inay ku sii jiraan blogkaaga tan iyo in ka badan 46% dadku waxay qiimeeyeen kalsoonida goobta iyadoo lagu salaynayo naqshadeeda sida qaabkeeda, cabbirka farta, qaab-qorista, iyo nidaamyada midabka.
Waxaad ka heli kartaa mawduucyada WordPress oo bilaash ah oo u muuqda kuwo aad u fiican, laakiin mawduucyada qiimaha leh waxay u muuqdaan inay u muuqdaan kuwo xirfad leh oo cajiib ah. Waxay sidoo kale u janjeeraan inay helaan fursado badan oo loogu talagalay is-beddel degdeg ah iyo sidoo kale taageero.
Haddi aad doorato mawduuc WordPress ah oo bilaash ah ama qiimo leh, hubi in uu muuqaal ahaan u muuqdo mid soo jiidasho leh oo soo dhawaynaya.
Doorashada iyo Dejinta Plugins iyo Tools
Ku xiga liiska wax-qabadka ee barashada sida loo bilaabo blog-ka moodada waa inaad abuurto goob WordPress ah oo aad ku darto qalab kasta iyo qalab kasta oo aad u baahan tahay.
Waa kuwan noocyada caadiga ah ee plugins oo ay ku jiraan:
Noocyada kale ee laga yaabo inaad u baahato sida suuqgeynta xiriirka la leh, jiilka hogaanka, xubinimada, iyo xayaysiinta
Qaar badan oo ka mid ah noocyadan plugins ayaa lagama maarmaan u ah in la hubiyo in blog-kaaga uu si habsami leh u socdo, halka kuwa kale sida plugins-yada sawirada ay yihiin kuwo ikhtiyaari ah.
Sidoo kale waa fikrad wanaagsan inaad isticmaasho plugins kuwaas oo kor u qaadi doona waxqabadka blog-kaaga si ay uga caawiyaan goobtaada inay si fiican u qiimeeyaan natiijooyinka raadinta raadinta si dadku ay u helaan bloggaaga.
Isticmaalka kaydinta iyo sidoo kale xawaaraha iyo hagaajinta sawirka plugins ayaa kaa caawin kara inaad si dhakhso leh u xajiso blog-kaaga taasoo ah hab fiican oo lagu caawinayo isticmaalayaasha inay xiisaynayaan bloggaaga.
Sida laga soo xigtay Pingdom:
"Garaafyada kore, waxaan arki karnaa in celceliska heerka bounce ee boggaga ku shubaya 2 ilbiriqsi gudahood uu yahay 9%. Sida ugu dhakhsaha badan wakhtiga rarista bogga uu dhaafo 3 ilbiriqsi, heerka boodka ayaa kor u kacaya, ilaa 38% marka uu gaaro 5 ilbiriqsi.
In kasta oo fiilooyinka hagaajinta xawaaraha ay si weyn u wanaajin karaan waxqabadka goobtaada, waxa kale oo lagama maarmaan ah in la hubiyo in martigeliyahaagu uu sidoo kale dhakhso badan yahay. Habkaas, waxaad ku daboolan tahay labada dhinacba.
Haddii helitaanka bixiye martigelinaya ay weli ku jirto liiskaaga "sida loo bilaabo blog-ka moodada" liiska wax-qabadka, tixgeli inaad raadiso martigaliyayaasha horeba loogu hagaajiyay xawaaraha.
Tusaale ahaan, adiga oo ku martigelinaya goobtaada Behmaster, goobtaadu waxay si toos ah u noqon doontaa ilaa 200% dhaqso.
Waxa kale oo laga yaabaa in ay mudan tahay in la ogaado in qaar ka mid ah bixiyeyaasha martigelinta ay mamnuuci karaan qaar ka mid ah plugins WordPress sababtoo ah arrimaha amniga ama iswaafajinta. Hubi inaad ka hubiso martigeliyahaaga wax kasta oo plugins ah oo la ogaaday inay sababi karaan arrimo.
Faahfaahinta, fiiri Hagaha Bilowga ah ee Hagaajinta Xawaaraha Mareegta, Sida Si Wanaagsan Loogu Sameeyo Imtixaan Xawaaraha Mareegta (Waxaad Sameyneysaa Qalad), iyo Sida Loo Dardar Geliyo Boggaga WordPress (Hagaha 2019 ugu dambeeya).
Waxaa laga yaabaa inay jiraan baloogyada moodada oo badan, laakiin ma jiro mid leh aragtidaada gaarka ah. Hoos u dhigista meeshaada waxay kaa caawin kartaa inaad ka dhex muuqato dadka.
Haddii aad sameyso xoogaa cilmi baaris ah, waxaad arki kartaa waxa blog-yada moodada ay sameynayaan. Kadib, markaad aqoon u leedahay waxa tartanku qabanayo, waxaad ka fikiri kartaa sida blog-kaaga moodada uu u kala duwanaan doono oo aad doorato niche.
Waxa kale oo qiimo leh in la go'aamiyo qaabka qoraalkaagu noqon doono sababtoo ah taasi waxay kaa caawin kartaa inaad sii kordhiso astaantaada oo aad ka saarto tartanka.
Wax kasta oo aad doorato, hubso in nuxurkaagu yahay mid dhab ah oo lala xidhiidhi karo. Tani waxay kaa caawin doontaa inay dadka soo jiidato oo ay ku mashquuliso.
Istaraatiijiyada Mawduuca ee Bloggaaga Dharka
Istaraatiijiyadda nuxurku asal ahaan waa qorshe waxa aad rabto in aad ku samayso waxa ku jira balooggaga, ka dibna horumarin, maamulid, iyo suuqgeyntiisa.
Istaraatiijiyada nuxurka wanaagsan waxaa ka mid ah:
Cilmi-baarista iyo falanqaynta tartanka
Niche la doortay
Marka aad falanqeyso dhammaan meelahaas, waxaad qorsheyn kartaa nooca nuxurka aad ku daabici doonto blog-kaaga si aad ugu lug yeelato ugu badnaan iyo u beddelashada booqdayaasha macaamiisha.
Faahfaahinta, fiiri 5 Waxyood oo Muhiim u ah Mawduucaaga Marka loo eego Dhererka Mawduuca sannadka 2019, Sida Loo Abuuro Content Evergreen Taas oo Joogta (17 Talooyin iyo Khiyaamo), iyo 77 Tabaha La Xaqiijiyay si loogu Wado Gaadiidka Mareegtaada.
Samee Jadwalka Blogging
Hadda waxaad runtii bilaabaysaa inaad meel gaartid adigoo ogaanaya sida loo bilaabo blog-ka moodada ee adiga kuu gaar ah. Marka aad haysato istaraatiijiyad nuxur ah oo aad bilowdo inaad la timaado fikradaha boostada blog, waxaad u baahan tahay inaad dejiso jadwal daabacaad.
Si tan loo sameeyo, waxaad u baahan tahay inaad go'aansato inta jeer ee aad daabacayso qoraallada baloogga.
Cilmi-baarista blog-yada moodada kale iyo fiirsashada inta jeer ee ay daabacaan maqaallada waxay kaa caawin kartaa inaad go'aansato inta jeer ee aad daabacday qoraallada.
Fikrad ahaan, waa inaad higsaneysaa inaad si joogta ah u riixdo waxa ku jira ama soo noqnoqda in ka badan tartamayaashaada.
Inta jeer ee blogging (Isha sawirka: Hubspot.com)
Mar kasta oo inta jeer ee daabacaadaadu ay sarreyso, taraafikadaada ayaa sarreeya. Sida laga soo xigtay Hubspot, baloogyada soo dhejiyay 11 ama maqaallo ka badan bishii waxay arkeen laba jeer taraafikada ka badan blogyada kuwaas oo daabacay kaliya hal ama laba qoraal bishii.
Markaad daabacdo maqaallo ka badan kuwa kula tartamaya, makiinadaha raadinta waxay qaataan ogeysiis waxayna u qoondeeyaan bloggaaga mid firfircoon oo khuseeya. Tani waxay dhejisyadaadu ka dhigaysaa mid ka sarreeya natiijooyinka mashiinka raadinta si ay u arkaan dad badan.
Si lagaaga caawiyo inaad jadwal u sameyso qoraalada si dhakhso leh oo hufan, waxaad isticmaali kartaa plugin tafatir ah sida Jadwalka Tafatirka ama PublishPress.
Abuuritaanka jadwal daabacaadeed ayaa kaa caawin doona inaad si joogto ah maqaallo u dhejiso.
Suuqgeynta Maaddada iyo SEO
Kahor intaadan diyaar u ahayn inaad bilowdo qorista qoraalada blog-ka, waa fikrad wanaagsan inaad barato waxa ku jira suuqgeynta iyo SEO.
Suuq gaynta nuxurku waxa ay ka kooban tahay qorista maqaallo soo jiidasho leh kuwaas oo xog badan leh oo gacan ka geysta kor u qaadida astaanta si dabiici ah, iyo iyada oo aan la dhawaaqin iibka.
Hagaajinta Mashiinka Raadinta (SEO) waxay ku saabsan tahay hagaajinta iyo hagaajinta goobtaada iyo waxa ku jira si ay u darajeyso heer sare natiijooyinka mashiinka raadinta.
Tani waxay kaa caawinaysaa in taraafig badan u hago blog-kaaga adoon bixinin kharashka xayeysiiska.
Halkan waxaa ah dhowr ilo oo tafaasiil dheeraad ah leh:
Waxyaabaha Aasaasiga u ah Suuqgeynta
Sida Loo Noqdo Suuqgeynta Mawduuca Solo Ninja Iyadoo WordPress
Waa maxay Suuqgeynta Gudaha (iyo sababta ay si fiican u shaqeyso)
Liiska hubinta SEO ee WordPress - 45 Talooyin lagu kordhinayo taraafikada 571% 13 bilood gudahood
Sida Loo Isticmaalo Yoast SEO on WordPress: Tababar Dhamaystiran
Sida loo ogaado hoos u dhaca ku jira darajooyinka (Arrinta SEO ugu waalan ee aan aragnay)
Mid ka mid ah siyaabaha aad uga hirgelin karto SEO-gaaga blog-kaaga moodada ah waa inaad sameyso cilmi-baaris ereyga muhiimka ah.
Meesha SEO, ereyada muhiimka ah waxay tixraacaan ereyada inta badan laga raadiyo Google iyo makiinadaha kale ee raadinta. Markaad doorato erey caan ah oo caan ah oo aad ku darto maqaal dhowr jeer, waxay u sheegaysaa Google (iyo matoorada kale ee raadinta) in tani ay tahay mawduuca boostadaada blog.
Tani waxay ka caawisaa Google inuu ogaado marka qof raadiyo erayga muhiimka ah, goobtaada waa in lagu qoraa natiijooyinka.
Ku darista ereyada muhiimka ah ee ku jira macluumaadkaaga waa faa'iido sababtoo ah waxay ka caawisaa dad badan inay helaan maqaalladaada iyo blog-kaaga.
Waxaa jira saddex nooc oo ereyada muhiimka ah:
Ku daalay arrimaha WordPress iyo martigeliyaha gaabis ah? Waxaan bixinaa taageero heer caalami ah khubarada WordPress ee la heli karo 24/7 iyo adeegayaal aad u dheereeya. Eeg qorshayaashayada
Dabo-gaaban - Kelmad fure ah oo ah hal kelmad oo caadi ahaan ay adag tahay in lagu darajo iyaga maadaama ay inta badan isticmaalaan goobo kala duwan
Dabo dhexdhexaad ah – Erayada furaha oo dhererkoodu yahay ilaa laba ilaa saddex kelmadood
Dabo-dheer - Dhowr kelmadood ama weedh ay ku jiri karaan maqaallo sida "at, a, to, ama," iyo kuwo kale
Erayada muhiimka ah ee daba-dheer ayaa caadi ahaan ah kuwa ugu wanaagsan ee loo tago maadaama ay yihiin kuwo gaar ah, si faahfaahsan u sharraxaya oo u janjeera inay caan ka noqdaan sidaa darteed qof kastaa maaha inuu wax ku qoro hareeraha. Laakiin, sidoo kale waa caan ku filan in boqolaal qof ama ka badan ay si joogto ah u raadiyaan.
Haddii aad runtii rabto inaad ogaato sida loo bilaabo blog-ka moodada ah ee guuleysta, suuq-geynta waxyaabaha ku jira iyo SEO waa inay noqdaan aag muhiim ah oo diiradda la saaro.
Waxaad ka eegi kartaa Hagaha Tallaabo-tallaabo ee Cilmi-baadhista Ereyga (Bonus: Qalabka Cilmi-baarista Keydka ugu Fiican marka la barbardhigo) wixii tafaasiil ah.
Qoritaanka Boostada Blog-ga SEO iyo Isticmaalayaasha Maskaxda
Ka dib markaad doorato ereyada muhiimka ah si aad ugu darto macluumaadkaaga, hubi inaad si dabiici ah ugu qorto. Haddii kale, makiinadaha raadinta waxay u qaadan doonaan in nuxurkaagu yahay spam kaliya.
Ubucda qoraalka SEO waa hubinta in boostadaada blog ay ka jawaabto su'aalaha isticmaalayaashu qabaan marka ay raadiyaan mawduucaaga oo ay doortaan ereyga muhiimka ah.
Tani gabi ahaanba waa lama huraan sababtoo ah waxay kaa caawin doontaa inaad si fiican u darajeyso, waxayna sidoo kale kaa caawin doontaa in laguu arko mid lagu kalsoonaan karo oo lagu kalsoonaan karo akhristayaasha.
Sida Lacag Looga Sameeyo Blog-gaaga Fashion-ka
Markaad rabto inaad ogaato sida loo bilaabo blog-ka moodada, qayb weyn oo ka mid ah waa faahfaahinta farsamada, laakiin sida muhiimka ah waa ogaanshaha sida aad u qorsheyneyso inaad lacag ka sameyso bloggaaga.
Halkan waxaa ah fikrado dhowr ah:
Suuqgeynta Affiliate - Ku xidhidhinta alaabada dukaamada onlineka ah halkaas oo isku xidhka lagala socdo si aad u hesho credit iyo komishan qof kasta oo aad tixraacdo kaas oo wax ku iibsada xidhiidhkaaga.
Iibinta alaabta dhijitaalka ah
eBuugaag - Waxaad qori kartaa buug si aad kor ugu qaaddo kalsoonidaada ama aad qorsheysato in aad qoraaladaada blog-ka mustaqbalka u rogto ebook, ka dibna iibiso oo aad ku xayeysiiso bloggaaga.
Koorsooyinka interneedka - Bar xirfado kala duwan oo la xidhiidha moodada kuwaas oo u dhexeeya sida loo qaabeeyo labbiska si habboon iyo hagayaal moodo wax ku ool ah oo ku saabsan sida fashionistas ay u heli karaan shaqooyin ama u bilaabi karaan xirfado warshadaha moodada.
Alaabta kale ee dhijitaalka ah - Waxa kale oo aad iibin kartaa waxyaabo la taaban karo sida qaababka dharka la soo degsan karo.
Goobta xubinnimada - Samee darbiga lacagta lagu bixiyo si isticmaalayaashu ay isu diiwaan galiyaan si ay u daawadaan premium, waxyaabaha gaarka ah sida sida loo naqshadeeyo oo loo abuuro dharkaaga iyo khadka dharkaaga, tusaale ahaan.
Joornaal Dijital ah ama buug eeg - Waxaad kula socodsiin kartaa isticmaaleyaashaada isbeddellada moodada ee ugu dambeeyay waxaadna iibin kartaa meel xayeysiis ah dakhli dheeri ah.
Ads - Si toos ah ugu muuji xayeysiisyada blogkaaga si aad u wadaagto dakhliga ay keenaan.
La-taliyaha dharka - Waxaad u oggolaan kartaa macaamiisha inay si toos ah ula tashadaan goobtaada oo aad kula kulmaan app-ka wada sheekaysiga fiidiyowga ee bilaashka ah sida Skype ama ikhtiyaarka qaaliga ah ee kor loogu qaadayo, dareenka xirfadeed.
Dhacdooyinka iyo tigidhada dhacdada - Haddii aad rabto inaad ka fogaato kumbuyuutarkaaga oo aad si shaqsi ah ula shaqeyso taageerayaashaada, waxaad qorsheyn kartaa munaasabadaha iyo shirarka oo aad tikidhada uga iibin kartaa bloggaaga. Waxaad xitaa isticmaali kartaa aaladaha webinar si aad u abuurto dhacdooyinka dhijitaalka ah haddii aad doorbidayso inaad guriga joogtid.
Fikrado dheeri ah, fiiri 4 Fikradaha Shabakadda ee La Xaqiijiyay ee Dhinaca-Hustle-kaaga Online-ka ah, Waa maxay sababta meheraddaadu ay tahay in ay ku saleysnaato Habka Dakhliga Soo noqnoqda, iyo 11 Xubinnimada WordPress ee Plugins si loo qabto dakhliga soo noqnoqda.
Markaad bilawdo blog-gaaga moodada oo aad ku qanacsan tahay aqoontaada ku saabsan sida loo bilaabo blog-ka moodada, waxaad samayn kartaa suuq-geyn bulsho si aad uga caawiso balooggaga inuu helo taraafikada adoo isku xidha oo dhajinaya waxyaabo khuseeya baraha warbaahinta bulshada.
Wixii fikrado dheeraad ah, fiiri: 6 Siyaabaha Looga Faa'iidaysto Facebook ee Guusha Suuqgeynta, 8 Siyaabood oo Looga Faa'iidaysto LinkedIn ee Guusha Suuqgeynta, Xeeladaha Suuqgeynta Twitter-ka si kor loogu qaado Ciyaarta Bulshada, iyo Tabaha Suuqgeynta Pinterest iyo Xeeladaha Isticmaalayaasha WordPress.
Abuuritaanka Jadwalka Baraha Bulshada
Jadwalka warbaahinta bulshada waa dukumeenti ama xaashida faafinta meesha aad ku qorto qoraaladaada warbaahinta bulshada.
Tan waxaa ku jira taariikhda iyo waqtiga aad rabto inaad jadwal u sameyso qoraal kasta, waxyaabaha aad rabto inaad daabacdo oo ay ku jiraan qoraal, xiriirin iyo sawirro iyo sidoo kale baraha bulshada ee boostada lagu daabici doono.
Jadwalka warbaahinta bulshadu waa mid faa'iido leh sababtoo ah waxay ku hayaan habaysan iyo inay kaa caawiyaan inaad si joogto ah u dhejiso macluumaadka si blog-kaaga uu si aad ah ugu muuqdo dadka. Marka ay dadku arkaan qoraalladaada, waxay u badan tahay inay soo booqdaan bloggaaga.
Tani waxay sidoo kale gacan ka geysaneysaa kor u qaadista wacyiga sumadda.
Jadwalka warbaahinta bulshada waa in lagu abuuraa noocyo kala duwan oo qoraallo ah si ay akhristayaasha ugu hayaan suulasha oo ay ku hawlanaadaan macluumaadkaaga.
Haddii aad daabacdo hal nooc oo boosto ah, waxay noqon kartaa caajis dhab ah, dhakhso badan oo dadku waxay si toos ah uga boodaan boostadaada meel gaar ah. Taasi waa sababta ay tahay inaadan dhajin kaliya markaad daabacdo maqaal blog.
Waa kuwan noocyada kala duwan ee qoraallada warbaahinta bulshada ee aad qorsheyn karto:
Maqaallo wargelin ah sida hagayaasha adeegsadaha, iyo talooyin wax ku ool ah
Maqaallo dhawaan la daabacay oo leh tafaasiil qaar ayaa kicin doona xiisaha dadka
Kor u qaadida maqaallada dadka kale ee khuseeya bloggaaga
Tibaaxo ama odhaah dhiirigelin leh
Qoraallada qosolka leh sida kaftan iyo sheeko-sheeko
Sawirro cajiib ah, gaar ahaan la socda noocyada kale ee baraha bulshada
Nolol maalmeedkaaga iyo hab nololeedkaaga
Xulashada moodada maalinlaha ah iyo qaababka aad jeceshahay
Weydii su'aalo taageerayaashaada
Hubi inaad sidoo kale ku biirto wada hadalka oo ka jawaab faallooyinka iyo tweets. Waxa kale oo aad heli kartaa wada sheekaysi khuseeya oo ku dari kartaa labada senti.
Ilaa iyo inta aad ku darayso wada hadalka intii aad ku dhufan lahayd ama aad spam ku diri lahayd, waxaad kordhin kartaa ka qaybgalka qoraaladaada. Isdhaafsigu wuxuu kaloo horseedaa korodhka wacyiga summada.
Inkastoo tirada badan ee baraha bulshada ee halkaas ka jira ay u muuqan karaan kuwo xad dhaaf ah, uma baahnid inaad ku biirto dhammaantood. Soo hel goobaha ay ku sugan yihiin taageereyaashaada oo ku dheggan kuwaas.
Sida caadiga ah suulka, haddii aad rabto in dhagaystayaasha bartilmaameedka ahi ay u dhexeeyaan 18 iyo 35, markaa natiijooyinka sahanka ComScore waxay muujinayaan inaad diirada saarto Facebook, Instagram, Twitter, iyo Pinterest.
Goobaha ugu qiimaha badan ee warbaahinta bulshada ee kunka sano.
Isku xirka iyo Kor u qaadida Dheeraadka ah ee Bloggaaga
Waa maxay tallaabada ugu dambeysa ee barashada sida loo bilaabo blog-ka moodada? Waa isku xidhid Waxay ku caawin kartaa adiga oo faafinaya ereyga ku saabsan balooggaga.
Waa kuwan siyaabo aad uga faa'iidaysan karto isku-xidhka iyo sidoo kale fikradaha kale ee xayaysiinta:
Qor maqaallo oo u gudbi majaladaha moodada iyo baloogyada.
Ku biir blogging iyo kooxaha ganacsiga oo sug fursadaha Waxaa laga yaabaa inaad la kulanto podcasters u baahan martida ama laga yaabaa in astaanta moodada aad ugu jeceshahay uu soo booqdo aaggaaga oo waxaad codsan kartaa kulan ama waraysi iyaga. Waxa kale oo aad ka heli kartaa dhiirigelin ololahaaga suuqgeyneed.
Raadso dhacdooyinka moodada iyo shirarka fursadaha aad ku faafin karto erayga bloggaaga. Waxa kale oo aad ku bixin kartaa daboolida dhacdooyinkan balooggaaga tan iyo markii aad wax ka qoraysay wax ku saabsan isbeddellada, dhacdooyinka hadda jira waxay kor u qaadaan fursadahaaga lagu ogaanayo.
Tixgeli qorshaynta olole suuqgeyneed iyo sidoo.
Kuwani waa qorshooyin ay ku jiraan xeelado suuq-geyneed oo badan oo aad ku sameyso jadwal ka kooban, xayeysiis iyo waxyaabo kale oo xayeysiis ah muddo dheer. Waxay diiradda saarayaan fariin gaar ah oo ka soo horjeeda astaantaada iyo dhagaystayaashaada.
Marka si sax ah loo sameeyo, ololayaasha suuqgeyntu waxay kor u qaadi karaan wacyigelinta sumadda waxayna kordhin karaan ka qaybgalka iyo sidoo kale heerarka beddelka. Waxa kale oo ay keeni kartaa iibka badan.
Faahfaahinta, hubi Tusaha ugu dambeeya ee Ololaha Suuqgeynta, Isticmaal 5-ta tilaabo si aad u abuurto Qorshe suuqgeyn, iyo 13 siyaabood oo aad u abuurto olole suuqgeyneed oo wax ku ool ah oo ku saabsan miisaaniyad adag.
Ma nooshahay oo ma neefsato moodo? 👠🤵Hagaag, hadda waa waqtigii ugu fiicnaa ee aad rabitaankaaga u rogi lahayd ganacsi mustaqbalka adoo furaya blog-kaaga moodada ah. Eeg sida! 🤑Riix halkan Tweet
Haddii aad rabtay inaad blog ka samayso moodada, way fududahay inaad hadda bilowdo sidii ay ahaan jirtay waagii hore.
Si aad u bilowdo blogkaaga moodada, waxaad u baahan doontaa:
Dooro magac domain iyo martigelin WordPress ah oo la isku halayn karo
Xulo mawduuc WordPress ah
Samee plugins iyo qalabyada
Geli-gal dhammaan istaraatiijiyada nuxurka adag (kalandarka tifaftirka, SEO, warbaahinta bulshada) oo daboolaya dhammaan meelaha iyo kanaalada ay rajadaadu ku jirto oo la falgeli iyaga
Hadda, waa markaaga: ma qorsheynaysaa inaad bilowdo blog fashion ah? Weligaa ma furtay blog cusub? La wadaag khibradaada faallooyinka!
Sida loo helo dhamaadka sanadka Apple Music Replay liiska playlists
Sida loogu dhejiyo xallinta jir dhiska sanadka cusub ee Apple Watch